कसले जलायो पार्किङमा राखिएका तीन स्काभेटर ? | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
घर स्थानिय समाचार म्याग्दी समाचार कसले जलायो पार्किङमा राखिएका तीन स्काभेटर ?
कसले जलायो पार्किङमा राखिएका तीन स्काभेटर ?
२८ भाद्र २०७६, शनिबार ०९:०१
बेनी नगरपालिका–५ बगुवाखोलामा अज्ञात समुहले पार्किङ गरी राखिएको तीनवटा स्काभेटरमा गरिएको आगजनीमा नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले आगजनी पार्टीको संस्थागत संलग्नतालाई अस्वीकार गरेको छ । पार्टीले नदी आसपासमा भइरहेको उत्खनन्मा दबाव दिन मध्यरातमा ब्यानर राखेको भएपनि आगजनी पार्टीको आधिकारिक संलग्नता नभएको बताएको हो ।
नेपाल सरकारद्धारा प्रतिबन्धि लगाएपछि भूमिगत राजनीति गरिरहेका विप्लवका धौलागिरी ब्यूरो सदस्य पदम पुन ‘फिल्टर’ ले पार्टीको संस्थागत संलग्नता नभएको बताए।‘हामीले चेतावनी दिएर ब्यानर राखेका हौ,‘संस्थागत रुपमै आगजनीमा उत्रिएका छैनौ’ पुनले भने । उनका अनुसार कालिगण्डकी र म्याग्दी नदीमा राखिएका प्यानरलाई आधार बनाएर धमिलो पानीमा माछा मार्ने काम भएको हुनसक्ने भन्दै पार्टीको संलग्नतालाई अस्वीकार गरेका छन्। उनले आगजनी गरेको बारेमा पार्टीभित्र पनि छलफल सुरु भएको बताए ।
‘भौतिक आक्रमणमा उत्रिनै पर्ने अवस्था छैन,‘ब्यक्तिगत दुस्मनीको आधारमा पनि गरिएको हुनसक्छ’ अज्ञातस्थलबाट फोनमा पुनले भने । उनले सञ्चारमाध्यममा आएका सुचनालाई आधार बनाएर आफ्नो पार्टीको धारणाको रुपमा लिन समेत अनुरोध गरे ।
निर्माण ब्यवसायी संघ म्याग्दीका अध्यक्ष एवम् बिएन कन्स्टक्सनका सञ्चालक नारायण जिसीको बा २ क ८११८, बा २ क ८१२२ र बा २ क ८१२१ नम्बर डोजर जलेर नष्ट भएको थियो । स्काभेटर जलेर नष्ट हुँदा करिव ३ करोड २५ लाखको क्षती भएको कम्पनीले जनाएको छ ।यता सञ्चालक जिसीका अनुसार तीनवटै स्काभेटर सडकमा काम गर्ने तयारी सहित उद्योग हाताभित्र राखिएको बताए ।
बर्खा लगत्तै कालोपत्रे र सडक स्तरउन्नतीका कार्यका लागी राखिएको बताउँदै तीनवटैको किस्ता तिर्ने बाँकी रहेको बताए । तीनवटैको २ बर्ष अवधिमा प्रति स्काभेटर करिव ३३ लाखभन्दा बढी किस्ता तिर्न बाँकी रहेको बताउँदै शान्तिपूर्ण तरिकाले उद्योगधन्दा सञ्चालनको वातावरण बनाउन अपिल गरेका छन् । ‘हामीले समाजमा पनि धेरै सहयोग गरेका छौ,‘लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सबै पक्षबाट सहयोग हुनुपर्छ’ जिसीले भने । उनले आफुँले कसैलाई किटान गरेर दोषी नदेखाएको बताउँदै बेनी–बागलुङ सहित जिल्लाभित्रका योजनाहरु लैजाने अवस्थामा आगजनी गरिएकाले अवस्थामा काम प्रभावित भएको बताए ।
विप्लवभित्र फरक मत
स्काभेटर जलाइलगत्तै विप्लव माओवादीका जित क्षेत्री गुल्मेलीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा निर्माण ब्यवसायी संघ म्याग्दीका अध्यक्षका तीनवटा डोजर एकैसाथ आगजनी भन्दै पोष्ट गरेका छन् । उनले नै जिसी क्रसर उद्योगभित्र केही समय अगाडी जिल्ला जनपरिषद् म्याग्दीको नामबाट एउटा ब्यानर राखिएको तस्वीर आफ्नै फेसबुकबाट सार्वजनिक गरेका थिए ।
त्यसको केहीदिनपछि एकैसाथ तीनवटा डोजर जलाइएको थियो । गुल्मेली जिल्ला जनपरिषद्मा सक्रिय छन् । बेनी नगरपालिका वडा नं २ का वडा अध्यक्ष हिराबहादुर थापालाई दुब्र्यवहार गरेको तस्वीर समेत सोही सामाजिक सञ्जालबाट सार्वजनिक भएको थियो । विप्लव माओवादीकै फरक मत देखिएपछि घटना थप रहस्यमय बन्दै गइहरेको छ । विप्लव माओवादी बिचमै फरक मत देखिएको छ । त्यस्तै नेकपा सम्बन्ध अनलाइनमा समेत समाचार राखिएको छ ।